EditShare သည်အဓိကအရောင်းချိန်းဆိုမှုများကိုကြေငြာသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » EditShare Key ကိုအရောင်းချိန်းကြေညာ
အားကောင်းလာစေရန်ရွှေ့ EditShare အမေရိကတိုက်အရောင်းဌာနခွဲ, မီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးစျေးကွက်ဖြတ်ပြီးကုမ္ပဏီ၏ shared သိုလှောင်မှုနှင့်ထုတ်လုပ်မှုပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းချက်များတိုးချဲ့ထောက်ခံပါသည်
ဘော်စတွန်, MA - သြဂုတ်လ 28, 2015 - EditShareတစ်ဦး အသိဉာဏ်က Shared သိုလှောင်မှုနှင့်မီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းချက်အတွက်နည်းပညာခေါင်းဆောင်, ယနေ့များ၏မြှင့်တင်ရေးထုတ်ပြန်ကြေညာ ဂျက်ဖ် Barnes အရောင်းဒါရိုက်တာနှင့်များ၏ထို့အပြင်မှ Keith Bodner များအတွက်လုပ်ငန်းအသွားအလာ Solutions များအတွက်အကြီးတန်းအကောင့်မန်နေဂျာအဖြစ် EditShare အမေရိကတိုက်။
တစ်ဦးကနည်းပညာပိုင်းကျွမ်းကျင်သူစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပရော်ဖက်ရှင်နယ်, က Jeff ရဲ့မွေးစားအတွက်ဆာခဲ့ EditShare'' s ကိုဘက်ပေါင်းစုံထုတ်လုပ်မှုပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု, ကြီးမားတဲ့ထုတ်လွှင့်ဌာနများနှင့်တိုက်ရိုက်ဖြစ်ရပ်အာကာသသို့ shared သိုလှောင်မှုနဲ့သိမ်းဆည်းပလက်ဖောင်း။ မိမိအအခန်းကဏ္ဍသစ်အတွက်, က Jeff အဓိကစနစ်များပေါင်းစည်းနှင့်အတူကုမ္ပဏီ၏ဆက်ဆံရေးကြီးထွားဖို့စက်ရုံပေါင်းစည်းမှု၌သူ၏အတိတ်ကာလအတွေ့အကြုံကိုပြုကြရန်တွန်းအားပေးခြင်းများ, အမေရိကတိုက်အရောင်းအဖွဲ့ကိုဦးဆောင်လမ်းပြစောင့်ရှောက်ပါလိမ့်မယ် EditShare အဆုံးမှအဆုံးသို့မီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်ရှေးခယျြသောဖြေရှင်းချက်၏ရှေ့တန်းမှမှာ။
ချီကာဂို, အီလီနွိုက်ပြည်နယ်အတွက် အခြေခံ. Keith Bodner ပူးပေါင်းမည် EditShare လုပ်ငန်းအသွားအလာ Solutions ၏အကြီးတန်းအကောင့် Manager ကအဖြစ်။ အားလုံးဖြတ်ပြီးသည်သူ၏ထူးချွန်ထုတ်ကုန်တင်ဆက်မှုကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အသိပညာလူသိများ EditShare ဒေါင်လိုက်, Keith မီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးအတွက်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတှေ့အကွုံနီးပါး 20 နှစ်ပေါင်းပညတ်တော်မူ၏နှင့်ထောက်ပံ့အတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှပါလိမ့်မယ် EditShare ရုပ်သံလိုင်းမိတ်ဖက် 'နှင့်ရောင်းဝယ်' 'ဆက်လက်ကြီးထွား။
ဂျက်ဖ် Barnes အကြောင်း
ယင်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး EditShare 2010 ကတည်းကမိသားစု, Jeff ထုတ်လွှင့်အတွက်အတွေ့အကြုံထက်ပို 15 နှစ်ပေါင်းရှိပြီး မာလ်တီမီဒီယာ အဆင့်မြင့်ပညာရေး, အားကစား, ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် postproduction အပေါငျးတို့သရှုထောငျ့၏ဧရိယာများတွင်အရောင်း, ပေါင်းစည်းမှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှု။ ထိန်းချုပ်မှုအခန်းတစ်ခန်းနှင့်ထရပ်ကားပတ်ဝန်းကျင်မှာနှင့်အတူပေါင်းစပ်ဖိုင်-based Workflows နဲ့သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုထွန်းသစ်နည်းပညာများနှင့်အတူရိုးရာထုတ်လွှင့်ဖြေရှင်းနည်းများဆိုထားသည်။ ဂျက်ဖ်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ထားပါတယ် EditShare ထက်ပိုမိုဆယ်နှစ်ထုတ်ကုန်။ အတူသူ့ရဲ့ပထမဆုံးအကျိုးတူအတွက် EditShare ရုပ်သံလိုင်းမိတ်ဖက်, Texolve တော်မူလျှင်, Pittsburgh Penguins တူသော marquee clients များအပေါ်ဆောင်ခဲ့အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍ, အဲဒီနောက်အဘို့အထုတ်လွှင့်နှင့် "ရှုပ်ထွေး Workflows" ပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ချန်ပီယံအဖြစ် EditShare အမေရိကတိုက်အရောင်းဌာနခွဲ။
Keith Bodner အကြောင်း
Keith ကျယ်ပြန့်မီဒီယာထုတ်လုပ်မှုနှင့်အရောင်းအတှေ့အကွုံအဖြစ်အလုပ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည် လွန်စွာလိုလားသော'' s ကိုရုပ်သံလိုင်းနာအကောင့်မန်နေဂျာနှင့်အသံလွှင့် Pix ရဲ့ဒေသဆိုင်ရာအရောင်းမန်နေဂျာ။ Keith ထုတ်လုပ်မှုထမ်းပြသနိုင်ဖို့ဖန်တီးမှုကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များကနေအထိအသုံးပြုသူများအတွက် post ကိုနှင့်ထုတ်လွှင့်ထုတ်လုပ်မှုဆက်သွယ်ထုတ်ကုန်အသိပညာ၏ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ ကုန်ပစ္စည်းနှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာအသိပညာသူ၏နံနှင့်အတိမ်အနက်ကိုအတူဿုံလက်ထပ် EditShare'' s ကိုထုတ်ကုန်ဖြေရှင်းချက်၏ပြောင်းလဲနေသောနယ်ပယ်။
အကြောင်းပိုသိချင်တယ်ဆိုရင် EditShare နှင့် EditShare ထုတ်ကုန်သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး www.editshare.com.
EditShare Post-ထုတ်လုပ်မှု, တီဗီ, နှင့်ရုပ်ရှင်စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်အဆုံးမှအဆုံးသို့လုပ်ငန်းအသွားအလာဖြေရှင်းနည်းများ, ကွန်ရက်ကိုမျှဝေရန်သိုလှောင်မှုနဲ့ tapeless အတွက်နည်းပညာခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏သဲထုတ်ကုန်ထိရောက်မှုနှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာပူးပေါင်းလမ်းတိုင်းခြေလှမ်းတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်။ ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံး 3-ပလက်ဖောင်းနေရာ (Windows / OS X ကို / Linux ကို) ပရော်ဖက်ရှင်နယ် Non-linear ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်လျှောက်လွှာ - သူတို့ကဗီဒီယိုရိုက်ခြင်းနှင့်ပလေးအောက်ကိုဆာဗာများ, high-performance ကိုဗဟိုက Shared သိမ်းဆည်းခြင်း, သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် backup လုပ်ထား software ကို, မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် Lightworks ပါဝင်သည်။
© 2015 EditShare LLC သည်.All rights reserved. EditShare®တစ်ဦးမှတ်ပုံတင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ပါသည် EditShare LLC ။ ဤနေရာတွင်ဖော်ပြခဲ့တဲ့အားလုံးသည်အခြားအမှတ်တံဆိပ်ဟာသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာပိုင်ရှင်များပိုင်။
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ EditShare isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု အရောင်းချိန်း shared သိုလှောင်မှု ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် လုပ်ငန်းအသွားအလာဖြေရှင်းနည်းများ 2015-08-31
ယခင်: Volicon Observer Media ကိုထောက်လှမ်းရေးပလက်ဖောင်း (R) နယူးကွက်ကို Feature ကိုအတူဗီဒီယို၏တည်နေရာနှင့် Clip အမြန်နှုန်း
နောက်တစ်ခု: ChyronHego Lucy ဂရစ်ဖစ်ပြည့်စုံ Interface ကိုအားလုံး-နယူးဒီဇိုင်းအသစ်နှင့်အတူ CAMIO 4.2 မိတ်ဆက်